Tetikasa fizarana asa ao amin'ny gara Wuhu Railway Station Anhui Province
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-31
Wuhu Railway Station, miaraka amin'ny velarantany 50.000 m2, no gara lehibe indrindra eo amin'ny tsipika Nanjing mankany Anqing Inter-city Railway ao amin'ny faritanin'i Anhui. Amin'ity tetik'asa ity, ny Rapid Scaffolding dia nomem-boninahitra hanome ny scaffolding ny rafitra ho toy ny shoring, eo ambanin'ny andry lehibe 2.2 × 2.4m, mampiasa 0.9 × 0.9m ...
Rafitra fifampizarana sy ny fiasan'ny tetezana ao Hong Kong- Zhuhai-Macau Bridge
Ny tetezana Hong Kong-Zhuhai -Macau dia tetik'asa fanamboarana mitohy izay ahitana andiana tetezana, tionelina ary nosy artifisialy izay hampifandray an'i Hong Kong, Macau ary Zhuhai. Ny scaffolding sy ny formwork nomaninay dia omena voninahitra hampiasaina amin'ny iray amin'ireo nosy lehibe - West Ar ...
Ny fiatrehana ny lalao olimpika any Beijing mandritra ny herintaona
Hetsika fanisam-bato herintaona ho an'ny Lalao Olaimpika any Beijing amin'ny 8 Aogositra 2007. Manatrika ny hetsika fankalazana ny tompon'andraikitra sy ny solontenan'ny IOC avy amin'ny firenena sy faritra 205. Nahazo ny filaharana miorina amin'ny ivon-toerana fanokafana ny lalao Olaimpikan'i Beijing momba ny ...
Scaffold haingana ampiasaina ho toy ny fomba fanao amin'ny toetr'andro any amin'ny orinasa Symbol any Asia
Orinasa faharoa an'ny Asia Symbol no tsipika famokarana lehibe indrindra tokana eran'izao tontolo izao. Mila manamboatra ny orinasa izy ireo isan-taona ho toy ny fizahana mahazatra. Ny Rapid Scaffolding dia namatsy ny fitaovana ho an'ny asany maitambarany, ary nandany 24 ora fotsiny ny famitana ny fananganana scaffolding o ...
Mizara Scaffold Sy Formwork Ho an'ny Exhibition Nasionaly sy Ivotoerana Fivoriambe (Shanghai)
Miaraka amin'ny velaran'ny manodidina ny 855,946.8 metatra toradroa. Scaffolding haingana dia niasa tamin'ny tetikasa formwork fampirantiana fampiratiana China Expo (North Block) EPC Engineering (Fizarana faharoa). Tetikasa sub-formwork amin'ny faritra efitrano malalaky ny C1 16 m. Faritra C1 amin'ny rihana avo indrindra amin'ny rihana 5 miaraka amin'ny haavon'ny trano 32m, Ti ...
Nantong Sport Convention and Center fampirantiana
15 Oktobra 2006, lalao ara-panatanjahantena faha-16 an'ny faritanin'i Jiangsu sy seho hariva natao tao amin'ny Nantong Sport Convention and Exhibition Center. Nantong Sport Convention and Exhibion ​​Center dia nantsoina hoe “Kianja nasionaly sinoa tatsimo”, 2200 tapitrisa RMB ny fampiasam-bola tanteraka, ny kianja filalaovana ...
Mizara formwork ho an'ny Nanjing Metro
Ny tobin'ny metro Nanjing dia natao ho tobin'ny nosy ambanin'ny tany 2-andy sy rihana 2. Ny efitrano fandraisam-bahiny faharoa dia 6.28m, ary ny ambany rihana dia 4.85m. Ny firafitry ny gara dia miorina amin'ny alàlan'ny fomba fanokafana malalaka, ary ny rafitry ny boaty ambanin'ny tany 2-bay sy 2-storey. Ny dimensio ...
Tetikasa fantsona seranam-piaramanidin'i Nanjing Lukou International Airport (faritra F1-3), hita any amin'ny fantsona vaovao atsimo, sahabo ho 796m ny halavany, misy boaty misy rindrina miolikolika misy lalana sy lalana ankapobeny. 9.8m ny haavon'ny halavany. Ny tetik'asa fanitarana dingana faharoa dia 1100 mm. Vy hidin-kapila ...